MAINTIRANO : Maherin’ny roa isan’andro ny faty ao amin’ny hopitaly vokatry ny tsy fandriampahalemana
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin’ny Distrikan’i Maintirano ankehitriny. Andrenesana fanafihan-dahalo isan’andro any amin’ireo Kaominina ambanivohitr’i Maintirano. 2 novembre 2017
Faritra mena tanteraka any an-toerana efa ho efa-bolana izay. Araka ny vaovao voaray dia mandry tsy lavo loha ny mponina any an-toerana amin’izao fotoana. Voalaza fa efa nisy ihany ny fanafihan-dahalo tany amin’ny Faritr’i Melaky iny saingy efa diso tafahoatra izany ankehitriny.
Raha ny fampitam-baovao voaray dia isan’andro no ahitana fatin’olona novonoin’ny dahalo sy olona maratra tonga ao amin’ny Hopitalin’i Maintirano. Maty amin’ny fomba feno habibiana avokoa no fahitana ireo razana tonga ao an-toerana sy ireo maratra tsaboina ao. Zava-maranitra, toy ny antsy lava sy basy mahery vaika no ampiasain’ireo malaso manao fanafihana.
Ankoatra izany dia misy ihany koa ny valifaty samy mpiray tanàna ka maro ny vokatr’izany any an-toerana ankehitriny. Voalaza fa mafana ra ireo dahalo manao fanafihana any amin’ny Faritra satria na ny Lehiben’ny Fokontany manao ny asany dia vonoin’izy ireo. Tsy mifidy isan’omby hangalarina ihany koa izy ireo fa na telo aza dia lasibatra hatrany. Efa tsy matahotra fa na amin’ny antoandro be nanahary dia mahavita ny asa ratsiny ireo olon-dratsy any amin’ny Faritra ankehitriny.
Miantso vonjy amin’ny fitondram-panjakana noho ny zavatra iainan’izy ireo ny mponina any amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Maintirano mba hijery izany satria mafana dia mafana ny tsy fandriampahalemana any an-toerana.